News & Events | Padamyar FM Radio
ရီးရဲလ်၌ ကစားသမားဘဝ အဆုံးသတ်ချင်ကြောင်း ရော်နယ်ဒိုပြောကြား
Sat , Dec 09 2017 - 03 pm
ပြင်သစ်ဘောလုံး မဂ္ဂဇင်းက ပေးအပ်သော ဘလွန်းဒီအော် (ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ဘောလုံးသမား) ဆုကို စီရော်နယ်ဒိုက ငါးကြိမ်မြောက် ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်၌ နောက်ထပ်နှစ်အနည်းငယ် အတွင်း ခြေစွမ်းကောင်းကောင်းဖြင့် ကစားနိုင်မည်ဟု ယုံကြည်ကြောင်း ရော်နယ်ဒိုက ပြောကြားလိုက်သည်။ အဓိကပြိုင်ဘက် မက်ဆီနှင့်နေမာကို
၂၀၁၈ ခုနှစ်ကစတင်ပြီး မောင်းသူမဲ့ကားများ ဂျပန်တွင် ပြေးဆွဲရန် Nissan စီစဉ်
ဂျပန်နိုင်ငံ၏ နာမည်ကျော် ကားကုမ္ပဏီကြီး တစ်ခုဖြစ်သည့် Nissan သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်က စတင်ပြီး မောင်းသူမဲ့ကားများကို ပြေးဆွဲနိုင်ရန်အတွက် မိမိဇာတိနိုင်ငံတွင် စတင် စမ်းသပ်လျက်ရှိကြောင်း သတင်းဖော်ပြထားသည်။ Nissan နှင့် အခြား နည်းပညာ ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည့် DeNA တို့ ပူးပေါင်းကာ ယိုကိုဟားမားမြို့တော် မီနာတိုမီရာအီဒေသ
ဂျပန် ဘုရားကျောင်းတစ်ခုမှာ ဆာမူရိုင်းဓားဖြင့် တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပြီး သုံးဦးသေဆုံး
Sat , Dec 09 2017 - 02 pm
တိုကျိုမြို့က သမိုင်းဝင် ဘုရားကျောင်းတစ်ခုမှာ အမျိုးသားတစ်ဦးက ဆာမူရိုင်းဓားနဲ့ တိုက်ခိုက် ထိုးခုတ်ခဲ့မှုကြောင့် လူသုံးဦးသေဆုံးပြီး တစ်ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ ဂျပန် ရဲတပ်ဖွဲ့က ပြောပါတယ်။ မြို့တော်တိုကျိုက တိုမီအိုကာ ဟာချီမန်ဂူ ဘုရားကျောင်းမှာ ဒီဇင်ဘာ ၇ ရက်က ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ယင်းဖြစ်စဉ်မှာတော့ ဘုရားကျောင်းရဲ့
ဂျေရုဆလင် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ဆန့်ကျင်သည့်အနေဖြင့် ဆန္ဒပြသူများက အိမ်ဖြူတော်ရှေ့ စုဝေးဆုတောင်း
ဂျေရုဆလင်ကို အစ္စရေးနိုင်ငံ၏ မြို့တော်ဟု အသိအမှတ်ပြုသည့် အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်၏ ကြေညာချက်အပေါ် ကန့်ကွက်သောအားဖြင့် မနေ့က ရာနှင့်ချီသော ဆန္ဒပြသူများ အိမ်ဖြူတော်ရှေ့၌ စုဝေး ဆုတောင်းခဲ့ကြသည်ဟု သိရသည်။ ပါလက်စတိုင်း ရိုးရာ လည်စည်းပ၀ါများ ၀တ်ဆင်ထားသော ရာနဲ့ချီသည့်
ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ မှာ မြောက်ကိုးရီးယား ဗိုလ်စွဲရင် ဆုကြေးငွေပေးမှာမဟုတ်
Sat , Dec 09 2017 - 11 am
မြောက်ကိုးရီးယား နိုင်ငံကို စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ အရေးယူမှုတွေကြောင့် အခုလကျင်းပမယ့် အရှေ့အာရှဖလား ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ မှာ မြောက်ကိုးရီးယား ဗိုလ်စွဲရင် ဆုကြေးငွေကို ပေးမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြိုင်ပွဲစီစဉ်သူတွေက ပြောပါတယ်။ ဂျပန်က အိမ်ရှင် အဖြစ် ကျင်းပပြီး ဒီဇင်ဘာ ၉ ရက်နေ့မှာစတင်မယ့် အရှေ့အာရှဖလားဘောလုံးပွဲ ပထမဦးဆုံးနေ့မှာ မြောက်ကိုးရီးယား
Padamyar FM Wave
Head Office : Shop House (4) ၊ (၃) ထပ် နှင့် (၄) ထပ် ၊
Junction Square Compound ကျွန်းတောလမ်းနှင့် ပြည်လမ်းကြား၊
ကမာရွတ်မြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့။ စာတိုက်သေတ္တာအမှတ် (၄၃၃) ၊ ဗဟိုစာတိုက်ကြီး ၊ ရန်ကုန်မြို့
Studio : ပထမထပ် ၊ Junction Square Shopping Centre ၊ ကျွန်းတောလမ်းနှင့် ပြည်လမ်းကြား၊
ကမာရွတ်မြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့။ 01-539570
စာတိုက်သေတ္တာအမှတ် (၄၃၃)၊ ဗဟိုစာတိုက်ကြီး ၊ ရန်ကုန်မြို့။
© by 2013-2017. All Right Reserved. Developed By CREATiVE WEB STUDiO